“Wiilkeyga waxaa uu qorsheynayey inuu dhawaan uu la aqal galo gabadh iyadana duuliya ah”. - Latest News Updates
“Wiilkeyga waxaa uu qorsheynayey inuu dhawaan uu la aqal galo gabadh iyadana duuliya ah”.
Dadki ku dhintay shilki diyaaradeed oo maanta looga baroordiiqay Addis Ababa
Wasiiradda gaadiidka Itoobiya Dagmawit Moges ayaa Khamiisti warbaahinta u sheegtay inuu duuliyaha uu dadaalay “balse u suuragelin inuu diyaaradda shil uu ka badbaadiyo”.
Shilka diyaaradda 737 Max oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha Itoobiya ku yimid ayaa imanaya xilli ay bilooyin ka soo wareegeen shil kaa la mid ah oo ku yimid diyaaraddii noocaasi ahayd oo ay lahayd shirkadda Lion ee dalka Induniisya.
Aabbaha dhalay duuliyaha diyaaradda Muxuu yiri?
Dr Tessema oo aad uga murugeysan geerida ku timid wiilkiisa 29 jirka oo ahaa duuliyihi diyaaraddi burburtay ayaa sheegay inuu wiilkiisa uu waaya aragnimo ka badan 8,000 oo saacadood oo duulinta diyaaradaha uu lahaa.
“Marki la ii sheegay shilka dhacay inuu wiilkeyga ku dhintay waan miir daboolmay maalmo ayaa isbitaalka la igu hayey ilaa iyo haddana waan u qaadan la’ahay geerida wiilkeyga ku timid” ayuu yiri Dr Tessema.
Wariyaha BBC Emmanuel Igunza wuxuu u sheegay “wiilkiisa iyo duuliyaha labaadba inuu ku faano runti sida geesinimada leh ay isugu dayeen iney diyaaradda shil uga badbaadiyaan balse nasiib darro ay ku guulyesan”.
Xog laga helay sanduuqa madoow ee diyaaraddii Itoobiya
Hooya malinwalba ku ooysa goobta ay ku burburtay diyaaraddii Itoobiya
“Kamana qoomameynayo inuu dhintay isaga oo duuliya ah, balse wuxuu dhintay isaga oo waajibkiisa shaqo gudanaya”.
Wuxuuna Dr Tessema eed kulul uu u soo jeediyey shirkadda Boeing isaga oo sheegay “Shilki diyaaradda 737 ee Induniisya marka uu dhacay kaddib maxay diyaaradaha noocaasi ah Boeing uga joojin weyday duullimaadyada? maxay ugu oggolaadeen iney diyaaradahaasi hawada ku sii jiraan? waxay taa ka dhigan tahay iney ganacsigooda mooyee nafta bani aadamka wax qiima ah la lahayn”
Shirkadda Boeing oo Khaldkeeda qiratay
Su’aalo la’iska weeydiinayo Boeing kadib shilkii Itoobiya
Previous articleNin aad ugu dhaw Trump oo loo doortay gudoomiyaha Bankiga aduunka
Next articleMeydka ruux dumar ah oo lagu arkay Muqdisho